प्रोत्साहन | प्रेरक संसार
एक दिन नाथेनायल हार्थन निराश हुदै घर आएर पत्नी सोफियालाई सुनाए कि उनलाई नोकरीबाट निकालियो, अब उनी असफल बनिसकेका छन् । यो सुनेर सोफिया दुःखी...
एक दिन नाथेनायल हार्थन निराश हुदै घर आएर पत्नी सोफियालाई सुनाए कि उनलाई नोकरीबाट निकालियो, अब उनी असफल बनिसकेका छन् ।
यो सुनेर सोफिया दुःखी भइनन्, बरू खुसी हुदै भनिन्, 'अब तपाईले आफ्ना पुस्तकहरूलेख्ने समय पाउनुभयो ।'
'हो' नार्थनले लामो स्वास फेर्दै भने, 'तर किताब लेख्न तिर लागेभने हाम्रो खर्च कसरी चलाउने?'
तब उनकी पत्नीले दरजबाट धेरै पैसा निकालिन । हार्थन अचम्म पर्दै सोधे 'कहाँबाट आयो यती धेरै पैसा ?'
पत्नीले जवाफ दिइन्, 'मलाई सुरूदेखिनै थाहा थियो तिमी प्रतिभाशाली मान्छे हौ । मलाई थाहा थियो कुनै दिन तिमीले अमर ग्रन्थ लेख्नेछौ । यसर्थ घर खर्चका लागि हरेक हप्ता जुन पैसा तिमीले दिन्थ्यौ त्यसैबाट मैले थोरै पैसा जोगाउने गर्थे । अहिले यो पैसा यती धेरै जम्मा भइसक्यो कि एक वर्षसम्म हामीलाई आरामले पुग्नेछ ।'
पत्नीको यसै विश्वासको आधारमा अमेरिकी साहित्यको महान् उपन्यास द स्कार्लेट लेटर लेखियो ।
यदि विश्वास गर्ने पत्नी सोफिया नभएको भए सायद आज नाथोनायल हार्थनको नाम महान् साहित्यकारको सूचीमा पर्ने थिएन ।
- निडो क्युविन
प्रेरक संसार: प्रोत्साहन